सिद्धार्थ बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २३ जेठ २०७६)
बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १ अर्ब ५९ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा बैंकले रू. १ अर्ब ३८ करोड नाफा कमाएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ८९ करोड ५३ लाख छ । एनएफआरएस प्रणालीअनुसार बैंकले आर्जन गरेको नाफाबाट विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर बाँकी रहेको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो ।
बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ८८ करोड छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । हालसम्ममा बैंकले १५३ ओटा शाखा कार्यालयबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । मंगलवार बैंकको शेयरमूल्य २ अंक घटेर रू. ३३२ मा बन्द भएको छ । सो दिन ८ हजार ९५८ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
2019-06-06 - 182 view(s) - abhiyan